Tababar xirfadeedka iyo horumarinta shaqada ee konfurta dhexe ee somalia
CISP waxay la shaqsaa dumarka iyo dhalinyarda, ganacsatada, iskoolada, madaxda degaanka iyo Ururyada Bulshada, si aan u siino farbarashada, tababar xirfadeedka iyo shaqo loo fidinaao wiilsha iyo gabdha dhalinyarada Galgaduud iyo Koonfurta Mudug.
Waxaa jira warbixino dhiira gelin oo nasoo gaaraayo oo ka sheekeynaayo sida dadka Soomaaliyeed ay wax uqsanaayaan ama go’aan uga gaareen mustaqbalkooda.
The International Committee for the Development of Peoples (CISP) waxay la shaqeynayaan dhalinyarda Soomaaliyeed si ay uga qaadaan dhibaata sabool nimada badan ku haysa, iygoo ka khalabeynaayo dhinaca waxba farrbarasho, tababar xirfadeed 6 xaafadood oo kamid ah Galgaduud iyo Koonfurta Mudug ee Koonfutra Dhexe ee Soomalia
Vocational Education and Training for Accelerated Promotion of Employment (VETAPE) Barnaamijkaan wuxuu bilowday 2010, CISP waxay dhinaca farbarashada iyo xisaabta muhiimka ah dhalinyaro gaareyso 2,670 (74% dumar) iyo tababarka xirfadaha oo ah 1,422 (45% dumar). Waxaa kale oo sugaaya in ay ka qeb qaataan barnaamijkaan dhalinyaro dhan 1,089 (39% dumar).
Waxaa kale oo barnaamijkaan uu u fidinaayaa dadka raba in ay ku shaqeystaan farsamo yaqaanimo sida laabta guryaha, dhismaha, sameynta dharka, daabaca dharka, tolida dharka, koronto yaqaan, farsameynta baaburta, gacanyaraha kalkaalisada, farsamada telefonada, farsamada tubooyingka, farsamada bira sameynta, Xisaabiye, kombutarka farsamadiisa iyo sakatariyad, waxaa barnaamijkaan nala soo hagaajiyey ganacsatada magaalada.
Barnaamijkaan wuxuu kale uu asaasay bartame lagu horumariyo shaqa, oo ka caawineysa dhalinyarada ka qalinjabiyey waxbarashada iyo qof u baahan in shaqo loo raadiyo iyo shaqa raba in ay shaqo cusub sameeyaan. Carwad bandhigeedka iyo qebaha shaqooyinka soo abaabula waxay ka caawineysaa in ay xoogiso xiirirka qeybaha dhalinyarada.
CISP waxay arkeen iswaydaarsi sare oo dhex maraaya dadka deegaanka degan iyo dhamaan kuwa ka qeybqaatay VETAPE barnaamijkiisa. Xiriirki dheer oo CISP la leedahay bulshada oo ku saleysan aminid iyo wada shaqeyn, CISP 28 sandadoo waxay caawinid ka geysatay dib u hagaaginta caafimaadka iyo iskoolada dugsiyda hoose, labda dhinac CISP ka gaareen dharajo sare.
Waa la fahmi karaa side uu barnaamijkaan oo u can baxay waxa uu qabtayna aan la yareyn karin, xukumadaha magaaloyinka iyo qeybo kamid ha bulshada oo raali ka ah barnaamijkan gacana ka geystay sidi ay u caawin lahaayeen dhalinyarada sidi u horumariyaan wadankooda. Barnaamijkaan ma aha shaqo abuurid, ee wuxuu siinaayaa rajo iyo waqti fiican oo ku horumaraan dhalinyarada oo aan weligood a
Home Tababar xirfadeedka iyo horumarinta shaqada ee konfurta dhexe ee somalia